मण्डलको आरोप : ‘प्रचण्डजी होस् चाहे माधवजी, उहाँहरु सबैमा आशा थियो कि-केपी ओली चाँडै मर्दैछन्, त्यसकारण यो केही होइन पदको छट्पटी हो’ « रिपोर्टर्स नेपाल
मण्डलको आरोप : ‘प्रचण्डजी होस् चाहे माधवजी, उहाँहरु सबैमा आशा थियो कि-केपी ओली चाँडै मर्दैछन्, त्यसकारण यो केही होइन पदको छट्पटी हो’
सत्तारढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का स्थायी कमिटी सदस्य सत्यनारायण मण्डलले वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई असफल भए भनेर निश्कर्ष निकालेका पार्टीका नेताहरुले स्थायी कमिटीको बैठकमा त्यो कुरा प्रमाणित गर्न सक्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । र, ओलीलाई असफल भन्दै बाहिर नहिँड्नसमेत उनले नेताहरुलाई चेतावनी दिएका छन् । नेपाली रेडियो नेटवर्कबाट प्रशारण भएको ‘नेपाली बहस’ का लागि पत्रकार ऋषि धमलाले नेता मण्डलसँग कुराकानी गरेका छन् । हेरौं मण्डलसँगको कुराकानीको सम्पादित अंश :
माधव नेपाल र प्रचण्डले त प्रधानमन्त्री केपी ओली असफल भइसक्नुभएको निष्कर्ष निकाले नि स्थायी समिति बैठकमा के गर्नुहुन्छ ?
त्यो उहाँहरुको व्यक्तिगत धारणा हो । ‘केपी ओली असफल प्रधानमन्त्री हो भनेर उहाँहरुले बैठकमा प्रमाणित गर्न सक्नुपर्छ । त्यसैबाहिर भनेर हुन्छ ।
प्रचण्डले त अब केपी शर्मा ओली अध्यक्ष वा प्रधानमन्त्रीमध्ये एउटा पद छोड्नुपर्छ भनिसक्नुभयो नि ?
यसमा चाहे त्यो प्रचण्डजी होस् चाहे त्यो माधवजी होस्, चाहे अरु होस् । उहाँहरु सबैमा आशा र विश्वास थियो, कि केपी ओली चाँडै मर्दैछन् । त्यसकारण यो केही होइन, पदको छटपटी हो । यदि उहाँहरु केपी ओली दुईमध्ये एक पदबाट हटाउन कोसिस गर्दछन् भने यो उहाँहरुको योग्यता होइन, अयोग्यता हो । अहिलेको नेपालको राष्ट्रिय परिस्थितिमा यो दूर्भाग्य हो ।
प्रधानमन्त्रीले काम गर्न नसकेर जताततै असफल हुनुभयो रे, भारतसँग पनि सम्बन्ध बिग्रियो रे उहाँको कारणले ?
त्यसो भए तपाईंले उहाँहरुलाई यो नेपाल होइन भारत हो भन्नुस् । मोदी जमिनदार हो अनि नेपालका यी नेताहरु सब रैति हुन् । भनिदिनुस् न सम्बन्ध चिसियो भनेर । एकातिर देशभक्तिको वकालत गर्ने । ५८ वर्षदेखि अतिक्रमण गरेको त्यो सीमा केपी ओलीले गरेको हो ? अनि सम्बन्ध चिसिएको हो । तपाईंंहरु पनि जे मन लाग्छ, त्यही सोध्ने । आवश्यकताभन्दा बढी कुरा सोधेर झगडा गराउन काम नगरिदिनुस् न ।
प्रचण्डजीले आलोपालोमा सहमति भएको हो, मैले उहाँलाई पाँच वर्षको प्रधानमन्त्री दिएर गल्ती भयो अब ब्याक हुन्छु भन्नुभएको छ नि ?
आलोपालोको कुरा भनेको एक व्यक्ति पद होइन । प्रचण्डजी पनि कुनै देउता होइन । उहाँ पनि हाम्रो आदरणीय नेता हो । प्रचण्डले यस्तो भन्नुभयो, उस्तो भन्नुभयो भनेर कसैलाई देवत्वकरण गर्नुछैन । ‘म पछि हट्दिँन, हट्नुहुन्न भने जाने तपाईंहरुको काम हो ।’ उहाँहरुले यस्तो कुरा उठाएर कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई कहाँ पु¥याउन खोज्नुभएको हो । यस्ता कुरा गरेर कसैको भविष्य राम्रो हुँदैन । तर, तपाईं कम्युनिस्ट त होइन । यहाँ त अहिले कम्युनिस्टलाई देख्नै सक्दैनन् मान्छेहरुले । त्यसकारण अहिले कहीं नभएको जात्रा हाँडीगाउँमा भनेजस्तै अहिले सबैको ध्यान नेकपाभित्र छ । आधुनिक नेपालको निर्माण भएदेखि अहिलेसम्ममा बल्ल राष्ट्रियताको निर्माण भएको छ ।
प्रधानमन्त्रीले त मलाई हटाउन भारतमा षड्यन्त्र भइरहेको र त्यसमा आफ्नै पार्टी नेताहरुको पनि संलग्नता छ भन्नुभयो नि ?
त्यो त ठीकै भन्नुभयो नि । षड्यन्त्र त भइरहेकै छ नि । यो कुरा अस्ति बैठकमै उठेको थियो । सोल्टी होटेलमा जासुसहरु आएर षड्यन्त्र गरिरहेका छन् । अर्को होटेलमा पनि केही व्यक्तिहरु बसेर षड्यन्त्र गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको भएकै कुरा हो नि ।
त्यसोभए नेपालका प्रधानमन्त्री हटाउन भारतले चलखेल गरिरहेको छ हो ?
हिजोसम्म नेपालमा भारतले जे चाह्यो त्यही भयो । होइन प्रधानमन्त्री हटाउन भारतमा खेल भइरहेको छ भनेर तपाईंले चाहीं के सोच्नुभएको हो त ?
प्रधानमन्त्रीले अस्ति भन्नुभएको होइन ?
हिजो संविधान बन्दाखेरी किन धम्कीहरु आए त ?
प्रधानमन्त्रीले मलाई हटाउन भारतमा षड्यन्त्र भइरहेको छ भनेको ठीक हो ?
प्रधानमन्त्रीज्यूले ठीक भन्नुभएको हो ।
अनि तपाईंकै पार्टीका नेताहरुले चाहीं किन असहमति व्यक्त गरेका त ?
उहाँहरुको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता हो । असहमति व्यक्त गर्न पाउनुहुन्छ ।
अब स्थायी समिति बैठकमा के हुन्छ ?
पार्टीको स्थायी समिति बैठकमा के हुन्छ ? बहस, छलफल हुन्छ । माधवजी हिजो पार्टीमा आउनुभएको हो ? हिजोको नेताहरु हो राणा शासनकै पालामा स्थापना भएको पार्टीको नेता हो ? कम्युनिस्ट आन्दोलनमा प्रचण्डजी आजको नेता हो ? कि उहिल्यैको पार्टीको नेताहरु ? पार्टीभित्र केही समस्याहरु छन् । केपी ओलीका केही कमीकमजोरीहरु होलान् । उहाँले सबैलाई राम्रो व्यवहार गर्न सक्नुभएन होला । त्यसमा छलफल, बहस हुन्छ नि । त्यसबाट एउटा निष्कर्षमा पुगिन्छ ।
तपाईंहरु किन छरपष्ट हुुनुहुन्छ मिल्नुस्न पहिला ?
कहाँ छरपष्ट भएको छ ? हामी मिलेकै छौं त ।
FILE PHOTO/REPORTERS’ CLUB NEPAL